I-BMW 330is Edition ihlonipha iGusheshe
Fanelesibonge Bengu | April 16, 2021
IMOTO: BMW 330is EDITION
EMLANDWENI wezimoto waseNingizimu Afrika, igama leBMW 325is noma iGusheshe liyohlale likhona.
Lena yimoto engadinge kuchazwa njengoba nanamuhla iseyintandokazi. Ukuyihlonipha nokuthi igama layo lihlale lisemqondweni wayo kwaBMW South Africa bakhe i-330s Edition. Le moto ngeyekhethelo njengoba kwakhiwe angu-230 kuphela futhi atholakala eNingizimu Afrika kuphela.
Isuselwe kwi-330i yabe isihluka ngendlela ebukeka ngayo njengoba beyigaxe iM Sport package, amarimu amakhulu angu-20 inch, igrille emnyama ngaphambili, front splitter, ispoiler ebhuthini nezinqawe ezimbili zeM Performance exhaust eziyenza idume kamnndi ikhiphe nomsindo osakuqhuma.
Ngaphakathi izinga liphezulu inemihlobiso ezicabheni eqoshwe u-330is, izihlalo zesikhumba, uyakwazi ukuyishintsha ukuthi ikhanye ngombala onjani, sunroof okhakhayini, izipika zeHarman Kardon sound system nokunye.
Iphinde ibe nezinto ezifana neshaja yeselula ngaphandle kwentambo, Apple CarPlay/Android Auto, Park Assist neGesture Control.
Ngaphansi kwebhonethi kunenjini engu-2 litre four-cylinder turbo kaphethroli enamandla angu-190kW no-400Nm. Amandla ashona emasondweni angemuva ngogearbox oyi-8 speed ozishintshayo kanti ukusuka ku-0 iye ku-100km/h kuyithatha imizuzwana engu-5.8.
Njengemoto yansukuzonke ikahle futhi okumnandi ukuthi inesikhala sokuthi abagibeli bahlale ngokukhuleka nebhuthi futhi inkulu. Iyazwela nokho emgwaqweni uma kunamabhampi kodwa uyakwazi ukushintsha isuspension ukuthi ifuna ibe njani njengoba ine-Adaptive M suspension.
Kuphethroli uma uhamba kahle iyonga futhi uma idinga ijubane ulithola ngokushesha.
Ngiyazi abanye bakhala ngokuthi akuyona iGusheshe yangempela nokuyinto nami engiyivumayo kodwa kusho ukuthi kukhona okubavimbile kwaBMW ukuvusa yona ngqo. Kungenzeka ukuthi ukuhoxiswa ukwakha i-3 Series efemini iPlant Rosslyn ePitoli kwenziwe i-X3 ngesinye sazo kodwa i-330is Edition yimoto esezingeni ngokwayo.